Ruushka oo tijaabiyey Hub Culus oo ay kaga dhinteen khubaradii Nukliyeerka | Himilo Media Group
Ruushka oo tijaabiyey Hub Culus oo ay kaga dhinteen khubaradii Nukliyeerka
Mosco, 15 August, 2019 (Himilo)-Shan Injineer oo u dhashay dalka Ruushka oo ka mid ahaa khubarada nukliyeerka ayaa ku dhintay qarax ka dhashay matoorka madfac wayn oo lagu aasay Sarov oo ah magaalo u dhow Moscow ahna meesha lagu sameeyo qeybta sare ee madaafiicda nukliyeerka.
Hay’adda Qaran ee Ruushka u qaabilsan nukliyeerka, Rosatom, waxay sheegtay in khubarada ay tijaabinayeen matoor laga sameeyay nukliyeer. Balse may bixin faafaahin dheeraad oo la xidhiidh dhanka farsamada.
Ruushka wuxuu hore u tijaabiyay gujis ku shaqeeya tamarta nukliyeerka oo loo yaqaano “Burevestnik”.
Laakiin saraakiisha Ruushka may cadeyn hannaanka dhabta ah ee qeybta ka ahaa tijaabadii musiibada isku beddashay ee Khamiistii.
Qaraxa waxa ka dhashay shucaac halis ah oo hawada ku jiray muddo 30 daqiiqo ah kaas oo cabsi geliyay magaalada Severodvinsk oo 40km u jirta heerka tijaabada la sameeyay, waxayna saaran tahay Badda Cad.
Seddax Injineer oo kale ayaa qaraxa ku dhaawacmay, waxaana hadda lagu daweynayaa cusbitaal, sida ay sheegtay hay’adda Rosatom.
Mark Galeotti, oo ah falanqeeye iyo cilmi baare sare oo ka tirsan machadka Royal United Services Institute (Rusi), wuxuu sheegay in fidinta nukliyeerka ay keeneyso caqabad weyn oo dhanka farsamada ah.
“Waxaa jiro xawaare iyo xajmi is ka soo horjeeda, iyo halista gantaal leh shucaac xawaare sare ku socda oo gaadhi kara meel kaste ee uu gaadho,” ayuu u shegay BBC.
Ruushka oo ka cadhooday tallaabo uu qaaday Mareykanka, kana baxay heshiiskii Nuclear-ka Ruushka oo tijaabiyay gantaal xambaari kara Nuyuukleer,